Xaalada magaalada Muqdisho oo maanta deggan & Khasaarihii dagaaladii ugu danbeeyey oo sii kordhaya. – Radio Daljir
Xaalada magaalada Muqdisho oo maanta deggan & Khasaarihii dagaaladii ugu danbeeyey oo sii kordhaya.
Febraayo 11, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Feb 11 ? Waxaa sii kordhaya khasarihii dagaalladii labadii maalmood ee ugu danbeeyey ka dhacayey gudaha magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhaxeeyey ciidamada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, AMISOM oo isku dhinaca ah iyo xoogagga mucaaradka ah ee dawladda ku kacsan.
Inta la xaaqiijiyey 71 ayaa ku dhaawacmay dagaalladii ugu danbeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale ku dhintay illaa iyo 16 qof oo qaar ka mid ahi ay dhaawac ku dhinteen kaddib markii la soo gaarsiiyey goobaha caafimaadka.
Dagaallada oo si xooggan u soconayey labo maalmood oo isku xigay, ayaa lagu tilmaamay in ay ahaayeen kuwa dhinacyada dagaallamayaa aysan waxba iskula harin, isla markaana ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo khasaaraha ugu badanna uu soo gaaray dad rayid ah.
Madaafiic culculus oo ay rideen ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM, ayaa la tilmaamayaa in ay ku habsadeen guryo ay dad rayid ahi degganaayeen kaddibna ay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta.
Dhanka kale hoobiyayaal ay tureen xoogagga dawladda ku kacsan ayaa iyana la tilmaamayaa in ay haleeleen goobaha dad shacab ahi ay ku noolaayeen, waxaana magaalada Muqdisho shalay illaa darraad ahayd magaalo colaadeed oo ka duwan sidii hore ee lagu yaqaannay.
Xaafadaha magalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ay deggan yihiin kooxaha dawladda ku kacsan, ayaa waxaa ka bilawday qax ballaaran oo ay dadku kaga cararayaan guryahood, iyagoo ka cabsi qaba dagaalladu in ay sii xoogaystaan iyadoo uu horay u jiray hanjabaado kulkulul oo labada dhinac ay isku mariyeen saaxafadda taas oo ku saabsanayd in ay dagaallami doonaan.
Xaaladda magaalada ayaa haatan la tilmaamayaa in ay deggan tahay illaa maanta, mana jiraan wax iska-horimaaddo ah oo magaalada ka dhacay sida ay soo sheegayaan wariyaasha idaacadda Daljir ee magaalada Muqdisho, hase ahaatee wali waxaa taagan cabsida iyo walwalka laga qabo dagaallo la mid ah kuwii shalay iyo darraad ka dhacay Muqdisho.
Wasiirkii ciyaaraha dawladda federaalka Saleebaan Colaad Rooble oo ku geeriyooday Sucuudiga.
Shirkii Issimada SSC ee Buurowadal oo maanta soo xirmay, qodobo badanna laga soo saaray.